Kelikely tsaratsara, vitsivitsy lehibe… | NewsMada
Kelikely tsaratsara, vitsivitsy lehibe…
Hatramin’izao, mbola mahabe resaka ny sasany ny amin’ny fahavitsian’ny kandidà amin’izao fifidianana ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsain’ny Tanàna izao. Misy ny manatsotra resaka hoe: maro ny kandidà, mimenomenona; vitsy ny kandidà, mimonomonona. Tsy hita ihany izay atao. Hahita ny antonona na izay mahafa-po aiza?
Na ahoana na ahoana, na inona lazaina sy izay mety ho fanazavana: mihatsinjo sompirana izao fa mihena an-toerana ho azy ny isan’ny antoko politika… be tsy andraofana. Nahoana? Vitsy ny tena manao ny asany sy ny andraikiny amin’ny maha antoko politika azy. Anisan’ny voalohany amin’izany ny fiatrehana fifidianana.
Mila omanina sy ivononana aman-taony izany fa tsy rehefa mivoaka ny tetiandrom-pifidianana vao mikoropaka. Natao haka fahefam-panjakana amin’ny alalan’ny fifidianana ny antoko politika, araka izay foto-kevitra sy ny vinam-piarahamonina ary ny fandaharanasa tiany hampiharina, raha tonga eo amin’ny fitondrana izy.
Izany ve ny ankamaroan’ny antoko politika eto amintsika hatramin’izay? Saika olona iray mbamin’izay akaiky azy no mitabataba isan’andro etsy sy eroa. Toy ny hoe misy vahoaka be na mpikambana marobe iny ao an-damosiny, nefa inona ny eo…? Tsy sahy miatrika fifidianana ny ankamaroany fa be tabataba fotsiny.
Koa hahagaga ve, ohatra, raha kelikely tsaratsara, araka ny fomba fiteny, ireo kandidà hoe mirotsaka amin’izao fifidianana kaominaly izao. Miharihary eny ihany izay tena vonona sy sahy, efa niomana ela… Tsy takona afenina izay, na toy inona fanamarinan-tena ny amin’ny hoe lehibe na madinika, malemy na matanjaka…
Politika io, arakaraka ny fifandanjan-kery sy ny tombontsoa iadiana sy arovana. Ady fiady… Amin’izany rehetra izany, tsy efa karazana firosoana miandalana amin’ny hoe mba vitsivitsy tsaratsara ve ny isan’ny antoko politika izao? Na vitsivitsy lehibe… Izay te ho lehibe sy hatanjaka hahazoana toerana, mila mivondrona.
Vao ny fahavitsiana sy ny fahalehibeazana no miseholany izao. Mbola mety ho avy ny amin’ny fiadiana sisiny noho ny foto-kevitra, ny vinam-piarahamonina, ny fandaharanasa…?